Nahitana firenena efatra: nodinihina ny fomba hitantanana ny valanjavaboary | NewsMada
Nahitana firenena efatra: nodinihina ny fomba hitantanana ny valanjavaboary
Ho fampiroboroboana sy fanatsarana ny fitantanana ny valanjavaboary, nametraka ny lisitra maintso na « green list » ny Vondrona iraisam-pirenena ho fiarovana ny zavaboary (UICN), ny taona 2014. Fanasokajiana iraisam-pirenena omena ny valanjavaboary voatantana ara-drariny sy mahomby ka mitondra vokatra tsara amin’ny fampandrosoana maharitra izany. Ho an’i Madagasikara, natolotry ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra handray anjara hahazo ny label ny valanjavaboary filamatra 15 ary anisany ny valanjavaboary ao Isalo tantanin’ny Madagascar National Parks (MNP).
Nisy atrikasa notanterahina tany Isalo nandritra ny hadimiana, ny volana novambra lasa teo nandinihana ny fomba mahomby indrindra hitantanana ny valanjavaboary. Sambany no nandray ny fihaonana iraisam-pirenena nahitana teknisiainina avy any Maorisy, Kaomoro, Seychelles isika. Nojerena manokana ireo fitaovana mety hanampy sy hanatsara ny fitantanana. Ho an’i Madagasikara, valanjavaboary 22 amin’ny 126 misy eto amintsika no nanana solontena tao amin’ny atrikasa. Nifampizarana tamin’ny mpivory ny fitaovana efa kirakiraina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena hahazoana mandrefy ny fahombiazan’ny fitantanana iray. Nofanina hahay hifehy izany fitaovana izany ireo mpiandraikitra ny valanjavaboary 22 malagasy sy ireo vahiny nanatrika. Fotoana nifampizarana ny olana sedrain’ny firenena tsirairay koa momba ny fitantanana ny valanjavaboary ny fihaonana tany Isalo
Zava-dehibe ny fitantanana izay fifamenoana eo amin’ny mpitantana ny valanjavaboary sy ny mponina mivelona manodidina amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra. Matetika ny fisian’ny olona monina akaikin’ny valanjavaboary no mametraka olana noho ny fari-pahazain’izy ireo ambany ka mahatonga ny fandoroana tanety sy ny tevy ala tsy mety foana tanteraka.
Nikarakara ny fivoriana ny minisiteran’ny Tontolo iainana, MNP, ny fandaharanasa momba ny fitantanana ny zava-mananaina sy ny valanjavaboary (Biopama)…